कुन दलको को हो तपाईंको प्रदेशको सम्भावित मुख्यमन्त्री ? - आयो खबर
कुन दलको को हो तपाईंको प्रदेशको सम्भावित मुख्यमन्त्री ?
२०७४ मंसिर १ प्रकाशित ०३:४०
मंसिर १, काठमाडौं । संविधानअनुसार मुलुकको पुनःसंरचना भएपछि पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। सातै प्रदेशमा हुने निर्वाचनबाट चुनिने प्रदेशसभा सदस्यले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुन्नेछन्। मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरुमा को–को छन् त आकांक्षी ?
कांग्रेसका ठूला नेता प्रदेश सभाको उम्मेदवार छैनन् । त्यसैले जिल्ला सभापतिहरू नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार देखिन्छन् । ताप्लेजुङबाट जिल्ला सभापति लीला बोखिम, पाँचथरबाट नरेन्द्र केरुङ, सुनसरीबाट राजीव कोइराला, उदयपुरबाट विदुर बस्नेत, सोलुखुम्बुबाट आङगेलु शेर्पा, खोटाङबाट विष्णु राई, धनकुटाबाट मनोहरनारायण श्रेष्ठ र तेह्रथुमबाट गोविन्द ढुंगाना उम्मेदवार छन् । उनीहरू नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । यीमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाका सबैभन्दा निकट आङगेलु शेर्पा हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेश नम्बर ५ बाट एमालेबाट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । पोखरेलले दाङ २ (ख) बाट र चौधरी परासी २ (ख) बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार छन् । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिनिधिसभामा उठाउनुपर्ने भएपछि पोखरेललाई अध्यक्ष केपी ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासनका साथ प्रदेश सभामा उठाएको स्रोतले जनाएको छ । सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले प्रदेशको समग्र विकास’bout पूर्वाधार, यातायात, पुँजी परिचालनलगायत १० वटा मुख्य एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ५ बाट कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ । उनी रोल्पा ९क० बाट उम्मेदवार बनेका छन् । तर, एमालेका तर्फबाट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई अगाडि सारिएकाले अवसर कसले पाउने भनेर निक्र्योल हुन निर्वाचन नै पर्खिनुपर्ने स्थिति छ ।
विना विभागियमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्वसांसद नरेश भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । शाहीले कालिकोट (ख) बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । भण्डारी जुम्ला (क) बाट उम्मेदवार छन् ।
शाही दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कालिकोटबाट निर्वाचित भएका थिए । भण्डारी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सभासद् थिए । प्रदेशसभामा समानुपातिक उम्मेदवार पूर्वमन्त्री सत्या पहाडी पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर १ प्रकाशित ०३:४०
छक्का पञ्जाको वर्चश्व
विश्वकप एक दिन बाँकी रहँदा बर्खास्त भए स्पेनी प्रशिक्षक जुलेन
देउवा र अधिकारी अख्तियारको घेरामा